Yenza umfanekiso wesitayile sikaAndy Warhol kunye neefoto zethu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UAndy Warhol ngokungathandabuzekiyo yenye ye amagcisa amnandi ilizwe lobugcisa banamhlanje, indlela yakhe ekhethekileyo yokubona izinto kunye neyakhe isitayela Ubugcisa be pop Iyamangalisa apho sinokuthi ngutata kunye nomphuhlisi ophambili wale ndlela intle.
Yenza umfanekiso wesitayile sikaAndy Warhouya kukuvumela Guqula zonke iifoto zakho kwisitayile esicocekileyo sobugcisa bokufumana ezinye Imifanekiso etsala amehlo kunye noyilo. Funda ukusebenzisa le ndlela yokufuna ukwazi kwimifanekiso yakho usebenzisa inkqubo Photoshop.
El isitayela pop art kunye Ukuchukumisa i-warhol ibonakaliswa kukusetyenziswa kwe imibala ebetha kakhulu kwaye igcwele, zihlala zisetyenziswa imibala ehambelana nayo (imibala echaseneyo) ukudibanisa ukubanda kunye nemibala efudumeleyo ekwakhiweni okufanayo, umahluko omkhulu kwaye isitayile esimangalisayo siyaphunyezwa.
Into yokuqala ekufuneka siyifumene yenza ifoto kwisitayile sokwenyani sikaAndy Warhol kukuba unayo ukufota okumnyama nomhlophe ukuqala ukusebenza kuyo. Kwimeko apho ifoto yethu ikumbala sinokuyiguqula ibe mnyama nomhlophe ukusuka kuyo Photoshop kuyilwa uhlengahlengiso lomaleko / omnyama nomhlophe.
Inyathelo elilandelayo linayo ezahlukeneyo ezimbini:
Faka umfanekiso / uhlengahlengiso / umqobo
Sebenza ngomfanekiso omnyama nomhlophe ngokuthe ngqote
Kule nyathelo sinokufaka isicelo ukusetwa kommiselo ukwenza umfanekiso wethu ube sisidima okanye uqale sebenza ngqo ngokufota okumnyama nokumhlophe. Kule meko umphumo usetyenzisiwe kunye nomfanekiso omnyama nomhlophe ngaphandle kokusebenzisa ukhetho.
IPodemos susa imvelaphi yethu yokufota kunye nasiphi na isixhobo sokhetho Ifotohop: Ibhendi yerabha, izaphetha, umlingo wand ... Emva kokucima imvelaphi senza umaleko omtsha kwaye siyibeka phantsi komaleko wefoto, ekugqibeleni siyigcwalisa ngombala othile omangalisayo.
Inyathelo lokugqibela liquka faka umbala Kumfanekiso kunye nokusebenzisa ibrashi, ukwenza oku kuya kufuneka senze umaleko omtsha kwaye tshintsha imo yomaleko ukusuka kwinto yesiqhelo ukuphindaphinda. Emva kolu tshintsho kuluhlu sinokuqala ukusebenzisa yonke imibala esiyifunayo ngaphandle kwengxaki.
Kwimizuzu embalwa sifika yenza isitayile esithandekayo seWarhol ngemifanekiso yethu kwangaxeshanye sifunda ukulawula izixhobo ezisisiseko ze Photoshop.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Yenza umfanekiso wesitayile sikaAndy Warhol kunye neefoto zethu
I-TERESA VALCÁRCEL sitsho
Yithande…. Ndiyathandana neli phepha …….
Phendula TERESA VALCÁRCEL